ढाड दुख्ने समस्याले पीडित हुनुहुन्छ कपुरको प्रयोगबाट यसरी पाउनुहोस् राहत – Khabar Silo
काठमाडौँ । धेरैको साझा समस्या हो। लामो समयसम्म कुर्सीमा बसेर वा निहुरिएर काम गर्नुपर्नेलाई त यसले झनै सताइरहेको हुन्छ।
मांसपेशी, नशा, हड्डी तथा जोर्नीलगायतमा भएको पीडाका कारण ढाडको दुखाइ महसुस हुन्छ। ढाड दुख्ने समस्याबाट पीडित हुँदा काम गर्न निकै कठिनाइ हुन्छ। काममा मन एकत्रित गर्न पनि सकिँदैन। त्यसैले यसको कारण र समाधानबारे सचेत हुनु आवश्यक छ।
किन दुख्छ ढाड ?**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
एउटै काम पटक–पटक दोहोर्‍याएर गर्दा मांसपेशीमा दबाब पर्छ। यसबाट मांसपेशीमा चोट पर्ने वा मांसपेशी थाक्ने हुन्छ ।यसबाट पिठ्युँमा दुखाइ महसुस हुन्छ। बढी गह्रौँ वस्तु उठाउँदा पिठ्युँमा बढी जोड पर्छ, जसले गर्दा दबाब परेर पिठ्युँमा पीडा महसुस हुन्छ।
पिठ्युँमा विभिन्न कारणले दबाब पर्दा मांसपेशी तन्किने, खुम्चिने तथा तनाव आउने हुन्छ। जसका कारण पनि पिठ्युँमा बढी दुखाइ महसुस हुन्छ ।पिठ्युँको प्राकृतिक स्वरूपमाथि अत्यधिक दबाब वा बढी निहुरिनेलगायतका काम गर्दा पनि पिठ्युँमा दबाब बढ्न गई पिठ्युँ दुख्ने हुन्छ।
यसरी गर्नुहोस् कपुरको प्रयोग
कपुरको प्रयोग पूजापाठको लागी धेरैले प्रयोग गर्ने गरेका छन्। यसलाई औषधिको रुपमा सही तरिकाले प्रयोगमा ल्याउन सकिएमा विभिन्न बिरामीको उपचार सजिलै गर्न सकिन्छ । यदि कसैलाई दम रोगमा यो अचूक औषधि साबित हुनेछ।
१ भाग फुराएको हिङमा १ भाग कपुर मिसिएर केराउको दाना जत्रो गोली बनाउने र २–२ गोली तातो पानीसँग बिहान–बेलुका सेवन गर्ने तथा तारपिनको तेल छातीमा लगाउनाले दम रोग केही महिनामा नै ठीक हुन्छ। यस्तै ढाड दुखेमा पनि यसले फाइदा गर्दछ
महान श्रीमान बिनोद खड्का भन्छन म त केटा हु सबैको अगाडि रुन पनि सक्दिन भन्दै भाबुक भए। हेर्नुहोस भिडियो
Posted on April 4, 2021 Author khabar silo
काठमाडौँ । ऋचा शर्मा नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी एक अभिनेत्री, मोडल र उद्घोषक हुन्। अहिले पनि नेपालको एक मात्र हाँस्ने र हँसाउने रियालिटी शो कमेडी च्याम्पियनकी जज् पनि छिन्। कमेडी च्याम्पियनको पहिलो श्रृङ्खलामा जज बनिसकेकी ऋचाले दोस्रो श्रृङ्खलामा पनि जज्को भूमिका निर्वाह गरिहेकी छिन्। धनगडीको सामान्य परिवारमा जन्मिएकी ऋचाले अहिले रानीको जस्तो विलासी जीवनशैली विताइरहेकी छिन्। […]
काठमाडौं कार्तिक महिनाकाे अन्त्य-तिर गर्मी-लाई विदाइ अनि जाडाेलाई निमन्त्रणा गरी स्वागत गरिरहेकाे शुभ प्रभातकाे समय सूर्यकाे किरणले शरीरमाथि भिटमिन डि उत्पादन गरिरहेकाे थियाे । आँखा माेवाइलकाे फ्रेमतिर दाैडिरहेका थिए । दाैडिरहेका अाँखा एउटा दृश्यमा टक्क अडियाे । त्यसमा विनाेद खड्का भाइकाे मर्म-स्पर्शी भनाइले वा दृश्यले मेरो अन्तरमनलाई छाेएर आँखा त अनायासै रसाउन थालेछन् । लगाएकाे […]
मुक्तीनाथ मन्दिरको १०८ धाराहरुको रहस्यमय खुलाशा ! शुद्ध मनले सेयर गर्नुहोस पुण्य मिल्ने छ !